Information hidda oo inaga caawin karta Fahmaan nololeed Khatarta for Disease - Rule News
Information hidda oo inaga caawin karta Fahmaan nololeed Khatarta for Disease
Lahjadaha hidda saadaaliyo khatarta noolaha cudurka, laakiin waxaa kale oo laga yaabaa inay awoodaan inay noo sheeg oo ku saabsan sababaha halista dabeecadda hiddo
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “macluumaad hidde oo naga caawin karta fahmi nololeed halis cudurka” waxaa qoray Suzi Gage, waayo, theguardian.com on Monday 22 February 2016 13.16 UTC
Marka aad ka akhrisan articles sheegtay in ay jiraan tiro ka mid ah hiddo-in la saadaaliyo cudur, sida caadiga ah macluumaadkan ka timaadaa waxbarashada ururka hiddawadayaasha oo dhan (GWAS). Kuwaas waxaa la xiqiijiyay in falanqayn-free isticmaali tiro badan oo dadka, iyo raadiyo ururada dhexeeya cudur iyo kala duwanaanta hidde in boqolaal dad badan oo kun oo goobood guud ahaan hiddawadayaasha ah.
Laakiin isagoo garanaya in ay jiraan 108 goobaha hidaha ee la xidhiidha schizophrenia ma aha qasab in waxtar leh haddii aad aqoon waxa kuwanu Lahjadaha hidde fiicnidaa. GWAS waa aalad cilmi, hab lagu caawiyo in uu fahmo cudur. Mararka qaarkood waxaa la og yahay in a codes duwanaansho for protein ah, ka dibna shaqo ee hiddo in ay fududahay in la fahmo, laakiin xilligaan la joogo shaqada noolaha ee badan ee kala duwanaansho hidde kaliya ma ahan iyaga ogeysiiyo, yareysey isticmaalka GWAS aalad cilmi.
Waxaa la malaysan in Lahjadaha hidde aqoonsaday by GWAS wakiil toos ah, arimaha khatarta noolaha cudurka a - ku "dabiiciga ah" halkii "korisaan" dhammaadka halista. My asxaabta iyo waxaan dhawaan leeyihiin la daabacay warqad taas oo aanu kuu soo jeedinaynaa in ay jiraan waxaa laga yaabaa in macluumaad dheeraad ah oo ka badan in ku jira natiijada gudahood.
Marka GWAS ah ee kansarka sanbabada ee la sameeyay, Werin kalena hidde waxaa si xoog leh oo la xidhiidha kansarka sanbabada jiray kala duwanaansho ah oo la garanayo ku yaalaan meel ka mid ah koromosoom 15 loo yaqaan "hiddo acetylcholine nicotine cluster receptor". duwanaansho Tani ayaa la sheegay in lala tirada sigaarka ku cabbin maalintii, in dadka sigaarka cabba. Inkasta oo laga yaabo in ay dhacdo in hiddo sidoo kale si madax banaan u kordhiyaa halista ah ee kansarka sanbabada, iyo sidoo kale u tiiraanyooday of sigaarka, waxa ay u muuqataa ilaa iyo haatan u badan tahay in kala duwanaansho la aqoonsado in GWAS ee kansarka sanbabada, sababtoo ah sigaar sababa kansarka sambabka.
Waxaa jira tusaale kale oo fiican in suugaanta aalkolada. duwanaansho A hidde ayaa loo aqoonsaday in ay saadaalisay isticmaalka khamriga. Waa codes for protein ah in jabo metabolites sun khamriga galay kuwa aan sun. Haddii aadan haysan wax badan oo ka mid ah protein this, heerarka sunta kara, aad ku keeni karo si ay u dareemaan xanuunsan oo cabursan. duwanaansho ma aha mid caadi ah in dadka Yurub, laakiin wuxuu ku badan yahay dadka reer isirka Asian Bariga. In kooxahan, GWAS of cadaadis dhiig oo sareeya aqoonsaday genotype gaar this khamriga la xiriira. Laakiin ma waxa uu arkay in GWAS of cadaadis dhiig oo sareeya ee dadka Yurub. Tani waa caddayn si caddaalad ah oo xoog leh in isticmaalka khamriga ka qayb laga yaabaa in cadaadis dhiig oo sareeya.
Natiijadu waxay keentay in fikirka xiiso leh: laga yaabee, iyo sidoo kale xaqiijinaya ururada sababaha aynu hore u garan (sida kansarka sigaarka iyo sambabka), waxaa inoo caawin kara si loo ogaado sababaha halista sababaha kale ee cudurka. Tusaale ahaan, duwanaansho isla sigaarka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay inay ku GWAS dhawaan of schizophrenia - Tani micneheedu waa laga yaabaa in sigaarka in uu yahay a arrin halis sababaha cudurka? Waxa suurto gal ah, inkastoo baadhitaan dheeraad ah loo baahan yahay si loo xaqiijiyo this, sida ay naqshadaha hidde weli suurtagal ah waxa lala wadaagi kari waayay.
Xilligan la joogo, xaddidaadda ugu weyn ee fasiraadda GWAS hab this waa in aan waxaa jira predictors aad u badan hidaha ee arrimaha halista modifiable aqoonsaday. Laakiin tani waxaa la beddelo. Tusaale ahaan, waxaynu og nahay in isticmaalka cannabis ugu yaraan qayb ahaan hiddo ah waa, talinaya waxaa qayb ka yahay hidde, laakiin weli ma kala duwanaansho la aqoonsaday. Marka Lahjadaha kuwaas bilaabin lagu helay, macluumaadka ku jira GWAS kor u furo waxaa laga yaabaa noo.
Oo waa sababta ay tani mid waxtar leh? Well, waxa inta badan ka sahlan in lagu caawiyo dadka badalo dhaqanka nololeed ay ka badan waa inay amarkaas beddelaan si ay genetics!
28809	5 Alcohol, Qodobka, Biology, genetics, Science, network blog Science, Muwaadiniintu cadaymaha, Sigaarka, Suzi Gage
← Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge casriga taraq The Technology Most Recent waalan iyo waxay Been Abuuran [VIDEO] →